China High Quality Button Cell Battery Sockets Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
Button Cell ဘက်ထရီ Sockets Holder
Button Cell Battery Sockets Holder ကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော CR2032 ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
Button Cell Battery Sockets Holder ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤ Button Cell Battery Sockets Holder ကို PA66 V0 ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများကိုအာမခံနိုင်ပြီးအဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောဤအကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူများသည်အဓိကဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအားလုံး၏လစ်သီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်များအားလုံးကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော notched battery slot ကိုပေးသည်။
Button Cell Battery Sockets Holder ၏ Product Parameter (Specification) ၂
ထုတ်ကုန်အမည် CR2032 Button Cell ဘက်ထရီ Sockets Holder
ပစ္စည်း: PA66 V0+GF, ကြေးဝါသွပ် Plated
3. Button Cell Battery Sockets Holder ၏ Product Feature နှင့် Application
၁။ ဤ Button Cell Battery Sockets Holder သည် 3.0v ဘက်ထရီကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်
6. အရည်အသွေးမြင့် PBT ပစ္စည်း
4. Button Cell Battery Sockets Holder ၏ Product Details
Button Cell Battery Sockets Holder အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR2032 Button Cell Battery Sockets Holder
ပစ္စည်း: PA66 V0+GF, Brass Tin Plated
အပူချိန်လည်ပတ်မှု: -55 ° C -105 ° C
၅။ Button Cell Battery Sockets Holder ၏ Product Qualification
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Button Cell Battery Sockets Holder အားလုံး
၆။ Button Cell Battery Sockets Holder ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်း
7. Button Cell Battery Sockets Holder ၏ FAQ
hot Tags:: Button Cell Battery Sockets Holder၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်၊ စိတ်ကြိုက် ၊ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအား၊ အဆင့်မြင့်၊ ဖန်စီ